My freedom: ဂရုဏာဒေါသော
ဒီမနက်တင် ပိုစ့်အသစ်တစ်ပုဒ် တင်ထားပြီးပေမယ့် ထပ်တင်ဖို့အကြောင်းက ဖန်လာတော့ ထပ်တင်ရပါဦးမယ်။ စိတ်ထဲဖြစ်နေတာကို စာရေးမှကို ဖြစ်မှာပါ။ နို့မို့ဆိုသက်သာမှာ မဟုတ်လို့ ရေးပါရစေနော်။ ဒီပိုစ့်ရေးတာ ဘယ်သူ့ဘယ်သူကိုမှ ထိခိုက်နစ်နာစေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ရေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကန်ဒီ့ခံစားချက်သက်သက်ကို ရေးပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ ကန်ဒီတို့ မြန်မာစာသင်တန်း ပြန်စဖွင့်ပါတယ်။ ကလေးတွေလည်း တက်ကြွ ဆရာမတွေလည်း တက်ကြွနဲ့ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကြီးပေါ့။ စာစ,သင်ရင်း စာဖတ်ရမယ့်နေရာရောက်တော့ ကန်ဒီက လက်ညိုးလေးနဲ့ စာကိုထောက်ဆိုဖို့ အားလုံးကို ပြောတော့ ကလေးတစ်ယောက်က ကန်ဒီ့ကို လက်ခလယ်ထောင်ပြပါတယ်။ မြန်မာကလေးတစ်ယောက်ဆီက တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးတဲ့ အပြုအမူတစ်ခုကို တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာ စိတ်ထဲထောင်းကနဲဖြစ်သွားတယ်။ ဒီကလေးလေးပုံကြည့်ရတာလည်း ဆိုးသွမ်းပြီး ပြောစကားနားမထောင် မျောက်ရှုံးအောင် ဆော့တတ်တဲ့ပုံစံမျိုး မဟုတ်ဘူး။ ဒေါသစိတ်နဲ့အတူ ကလေးကိုသနားတဲ့စိတ်၊ ဒီလိုမျိုး ရိုင်းစိုင်းတဲ့အပြုအမူမျိုး မရှိစေချင်တဲ့စိတ်၊ လိမ္မာယဉ်ကျေးစေချင်တဲ့စိတ်၊ မိဘတွေကို သနားတဲ့စိတ် အားလုံးက ရောထွေးနေတယ်။ ကိုယ်တိုင်ကလည်း Professional ဆရာမတစ်ယောက် မဟုတ်တဲ့အခါကြတော့ ဒီလိုကလေးမျိုးကို ဘယ်လိုဆုံးမသင့်လဲဆိုတာမျိုးလဲ ကိုယ်မသိဘူး။ ကိုယ်ဆိုဆုံးမပုံ မှားသွားမှာလည်း အရမ်းကြောက်သလို မဆုံးမလို့ လုံးဝမရဘူးဆိုတာလည်း သိတယ်။ ကလေးကို "သား ဆရာမဆီ ခဏလာခဲ့ဦး" ဆိုပြီး ခေါ်လိုက်တယ်။ ကန်ဒီနဲ့တူတူသင်တဲ့ဆရာမက ဒီနေ့လာတော့ သူပဲတခြားကလေးတွေကို ဆက်သင်ပေးတယ်။
ကလေးကိုခေါ်ပြီး စကားမစနိုင်ဘူး.. သူ့ကိုခဏကြည့်နေမိတယ်။ "သား.. ဘာလို့ ဒီလိုမျိုးလုပ်ရတာလဲ? ဘယ်သူသင်ပေးတာလဲ သား?" ကန်ဒီ့အသံတွေ တုန်နေတယ်။ မျက်လုံးအိမ်ထဲ မျက်ရည်စတချို့နဲ့ ပြည့်နေတယ်။ စိတ်ထဲမှာ ခုနကအတွေးတွေအများကြီးဝင်နေတယ်။ ကလေးကိုတော့ အေးအေးဆေးဆေးပဲ မေးတယ်။ ကလေးက "သားကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေ..." ကန်ဒီဆက်မေးတယ် "သား ဒီလိုလုပ်တာ မကောင်းဘူးဆိုတာ သိလား?" သူဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ မသိလို့လုပ်တာလားဆိုပြီး မေးကြည့်တော့ ကလေးက "သိတယ်"တဲ့။ အဲ့နေရာမှာတင် ဗုန်းဗုန်းလဲချင်စိတ်ဖြစ်သွားပြီး "သိရဲ့သားနဲ့ သားရယ်... ဘာလို့ လုပ်ရတာလဲ"ဆိုပြီး အာမေဋိတ်သံ သဲ့သဲ့နဲ့ ပြောမိတယ်။ ကန်ဒီ့ကိုကြောက်ပြီး ကန်ဒီပြောတဲ့စကားတွေ နားမ၀င်မှာစိုးလို့ သူ့ခေါင်းလေးကို သာသာလေးပွတ်ပေးရင်း "သား.. သားဖေဖေနဲ့ မေမေက သားကိုဘုန်းကြီးကျောင်းလာပို့တာ သားကို လိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့သားလေး ဖြစ်စေချင်လို့... ဆရာမကို သားဒီလိုလုပ်ပြလို့ ဆရာမက ဘာမှမဖြစ်ဘူး သား... ဒီအပြုအမူမျိုးကို ဆရာမ မဟုတ်တဲ့ တခြားတစုံတယောက်က မြင်သွားရင် သားကိုဘယ်လိုထင်မလဲ? သားကို လူဆိုးလေးလို့ပဲ မြင်မယ်... ပြီးရင် သားကို မဆုံးမရကောင်းလားဆိုပြီး သားမိဘတွေကိုပဲ အပြစ်တင်ကြမယ်..." ကန်ဒီသူ့မျက်လုံးကို စေ့စေ့ကြည့်ပြီး ငြင်ငြင်သာသာပဲ ပြောဖြစ်တယ်။ တကယ်က သူ့မျက်လုံးဆီက ကန်ဒီပြောတာကို နားလည်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဖြေကို လိုချင်မိတာ။ "နောက်တစ်ခါ ဒီအပြုအမူမျိုးမလုပ်တော့ပါဘူးလို့ ဆရာမကို ကတိပေးမလား သား" သူခေါင်းငြိမ့်တယ်။ သူ့ကို သူ့နေရာ ပြန်သွားခိုင်းလိုက်တယ်။ စာသာ ဆက်သင်နေတယ်။ ရင်ထဲမှာ ဆို့နေတုန်း...
ဖြစ်ချင်တော့ ကလေးကို ကန်ဒီခေါ်ပြီး စကားပြောနေတဲ့အချိန် ကလေးအမေက သူ့သားကို အခန်းထဲမှာ စာလုပ်ရဲ့လား လာကြည့်ရင်း တွေ့သွားပုံရတယ်။ အတန်းပြီးတော့ ကလေးအမေက သူ့သားကို မေးလို့မရတာနဲ့ ကန်ဒီ့ကို ဘာဖြစ်တာလဲ လာမေးတယ်။ သူသားကိုမေးတော့ "သား သိတယ်" ပဲ ပြောနေတယ်တဲ့။ အဲ့လိုလာမေးလာတော့ ကန်ဒီလည်း ဘာဖြစ်လဲ ပြောပြဖြစ်တယ်။ လာမမေးရင်တော့ သွားပြောဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ပြောပြပြီးမှ စိတ်ထဲ ကိုယ့်ကြောင့်ဒီကလေး အိမ်မှာအဆူခံရမလားဆိုပြီး စိတ်ထဲလုံးဝမကောင်းဘူး။ သူ့အမေကို မဆူဖို့ မပြောလိုက်မိဘူး။ ပြန်ခါနီး ကလေးအဖေက တစ်ခါ ကန်ဒီ့ဆီလာပြီး "ဆရာမ.. အမြင်မတော်တာရှိရင် သားကိုဆုံးမပါ.. အားမနာပါနဲ့" လာပြောတော့မှ ကိုယ်လဲသတိရသွားတာနဲ့ ကလေးကိုမဆူဖို့ ပြောလိုက်သေးတယ်။ ပြောသာပြောရပေမယ့် ကန်ဒီကိုယ်တိုင် မိဘဆိုလည်း ဂရုဏာဒေါသောနဲ့ ဆူမိမှာ အမှန်ပဲ။ မိဘနေရာမဟုတ်တဲ့ ဆရာမတစ်ယောက်နေရာမှာတောင် ဒီကလေးအတွက် စေတနာဒေါသနဲ့အတူ စိတ်မကောင်းဖြစ်၊ ကောင်းစေချင်တဲ့စေတနာတွေနဲ့ အသံတွေတုန်၊ ရင်တွေတုန်ရတယ်။
ကလေးငယ်ရွယ်စဉ်မှာ ပတ်ဝန်းကျင်က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေလုပ်ရင် လိုက်လုပ်မယ်။ လိုက်အတုခိုးမယ်။ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေ၊ လိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့သူတွေ ၀န်းရံနေဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ စာလေးရေးလိုက်တော့ ရင်ထဲနည်းနည်းပေါ့သွားပါပြီ။ ကန်ဒီကလေးကို ပြောပြတာလေးတွေ သူ့နားထဲ ရောက်ပါစေ။ ကန်ဒီ့ဆုံးမမှု နည်းလမ်းမှန်ကန်ပါစေလို့ ဒီနေရာက ဆုတောင်းနေရုံကလွဲလို့...
မနှစ်တုံးက သမီးရဲ့ဆရာမလေး... ကလေးတွေကို စေတနာထား၊ စိတ်ရှည်ရှည်ထား၊ သည်းခံသင်ပေးနေတာ အမြဲလဲ တွေ့နေရပါတယ် ။ ကျေးဇူးလဲ တင်ပါတယ်။
ညီမလေး ဆုံးမတာ မှန်ပါတယ်။ ကလေးလေး နားဝင်ပါစေလို့ပဲ ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ ခုနှစ် သမီးကို အတန်းတက်ပေးလိုက်လို့ ညီမလေး မသင်ရတော့ပေမယ့် အမြင်မတော်တာ ၊ မယဉ်ကျေးတာရှိရင် ဆုံးမပါလို့ အပ်ပါတယ်နော် ...။
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်... ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် :D